I-Nebulizing Diffuser, uNebulizing onguMatshini oMdayiyo oMdaka, umyili weArhente ye-Nebulizer Diffuser eChina
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lo shishino:Manufacturer IMakethe: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:61% - 70% ICredit:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Inkcazo:I-Nebulizing Diffuser,Ukuqulunqa i-Diffuser yeoyile ebaluleke kakhulu,Isichumisi seoyile sikaNebulizer,I-Ultrasonic Aromatherapy Diffuser,,
Home > Imveliso > I-Nebulizing Diffuser
Iintlobo zeMveliso ze- I-Nebulizing Diffuser , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Nebulizing Diffuser , Ukuqulunqa i-Diffuser yeoyile ebaluleke kakhulu ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Ultrasonic ye-oli Diffuser yeWalmart ye-Youtube
I-Aromatherapy Nebulizer Eyona Diffuser yeoyile ebaluleke kakhulu
I-100ml ye-Professional Elegance Nebulizing Aromatherapy Diffuser
I-USB Port Plastic Mini eyimfuneko yeoyile yeMoto
Akukho Manzi uphathekayo wamanzi we-USB Isithambiso Semoto
I-OEM / i-ODM / i-OBM yeNkonzo yeArhente engafunekiyo yeoyile yeDrafti yeMoto
I-Mist Arhente encinci Diffuser ebalulekileyo yeoyile ye-USB
Umatshini we-Diceus Diffuser Nebulizer Machine ngencwadi yomsebenzisi
Ukugcwaliswa kweNqwelo-mafutha eNgozi kubalulekile kwi-Usb Akukho manzi
Umbane weArmatherapy Diffuser eneoyile efunekayo yeLemon
Ukucofa komoya oZenzekelayo kweNzulizing i-Diffuser yeoyile
I-OEM yeNkonzo yoMoya weHumidifieravuta Diffuser Oyimfuneko yeoyile
I-Walmart Car Wooden ebalulekileyo ye-oyile ye-Diffuser
Iphunga elilelakho leNebulizing ivumba elifunekayo leeNgozi zeoyile ezibi
I-Wood Ultrasonic Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diffuser yeoyile
Aromatherapy Humidifier Aroma Essentialential Diffuser Air
7 Imibala ekhanyayo yokuKhanya eyiDiskus yeTyhefu yeoyile
I-Dolphin Shape Walmart Esibalulekileyo kwi-oli Diffuser Humidifier
I-Walmart Ultrasonic Fragrance Nebulizing Diffuser
Into ebaluleke kakhulu ye-oli yokuhambisa amanzi ngeNgethi yoMbane engenamanzi
Umzekelo No.: DT-1922
I-100ML i-USB yoRhwebo lwezoMbane eziThengiswayo zeNebulizing Diffuser S ISIHLOKO ESIBALULEKILEYO 】Ncinci kwaye zilula, zithathe naphi na apho uya khona. Le mini humidifier ilungele igumbi lakho lokulala, iofisi, desktop, igumbi labantwana, i-yoga, imoto, okanye uhambo. H I-ULTRASONIC HUMIDIFIER】 Isichumisi sokuphola...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: i-120 * 120 * 220mm kunye ne-Master carton: 495 * 375 * 460mm / 24pcs
I-Ultrasonic ye-oli Diffuser yeWalmart ye-Youtube Olu luyilo olulula kodwa olusebenzayo lwahlukile ngenxa yokuphezulu kokuhlaziywa. Unokujika indawo ephezulu ukuze uqondise ukungalungi kwimikhombandlela eyahlukeneyo kunokuya nje ngqo . Icandelo eliphakathi lihamba kancinci ngotshintsho ngombala womnyama, okanye...
Ixabiso lento: USD 6 - 7.39 / Piece/Pieces
I-Aromatherapy Nebulizer Eyona Diffuser yeoyile ebaluleke kakhulu [Ibalulekile ioyile yemoto ye-oyile] eyenzelwe indawo kwisitya semoto. Oku kususa izinto ezibonakalayo kungathatha indlela yakho yokuphila yonke ukuya kwinqanaba elitsha. [Isithako sonwele] I-Mini aroma diffuser iya kukhupha inkohliso enevumba elimnandi...
I-100ml ye-Professional Elegance Nebulizing Aromatherapy Diffuser Ngaba ukhe wanqwenela ukuba ungathatha indawo yakho yokunyibilikisa ekhayeni xa uhamba? Ewe, i-DITUO ye-humidifier yobuqu yeyona humidifier yomoya efanelekileyo yokuthatha kunye nawe xa uhamba ekhaya! Isichumisi esincinci esincinci sincinci kwaye siza...
Umzekelo No.: DT-002
I-USB Port Plastic Mini eyimfuneko yeoyile yeMoto Ngokuphambanisa ivumba elimnandi kunye nelokuphefumla, eli liyeza elincinci linokuphakamisa uxinzelelo ukusuka kumhla oxakekileyo, ioyile encinci yeoyile efanelekileyo yokugubungela umsi kunye nephunga elibi kwizilwanyana zasekhaya. I-Whisper-Quiet Ultrasonic...
Akukho Manzi uphathekayo wamanzi we-USB Isithambiso Semoto [I-USB Powered] -Ukulungele ngokufanelekileyo ukubamba indebe yemoto. Amaconsi ambalwa i-100 yeephunga elimnandi lepeppermint yeoyile eya kunceda ukuhambisa kude konke ukunganqweneleki emotweni yakho, ukonyusa amanqanaba amandla akho kunye nokuphucula...
I-OEM / ODM / i-OBM yeNkonzo yeArhente engafunekiyo yeoyile yeDrafti yeMoto I-Whisper-Quiet Operation Aroma Diffuser: Itekhnoloji yokutshiza ye-ultrasonic. Umsebenzi othuleyo kunye nenqanaba lengxolo ephantsi njenge-40dB. Ilungele amagumbi okulala, isifundo, iofisi, igumbi labantwana, njl. Iindlela ezi-3 zokuSasaza...
I-Mist Arhente encinci Diffuser ebalulekileyo yeoyile ye-USB >> Inkxaso yeoyile ebaluleke kakhulu: Le moto yokunyusa ivumba lephunga liya kuxhasa ioyile ukwenza imoto yakho ivumba limnandi kwaye uyonwabele ukuqhuba. >> Yeemoto / yokuhamba / iKhaya / iOfisi: Iphathwayo kwaye ilungele ukubamba ikomityi...
Ixabiso lento: USD 16.93 - 19.23 / Piece/Pieces
Umatshini we-Diceus Diffuser Nebulizer Machine ngencwadi yomsebenzisi UKUZEZA ISIQINISEKISO -BUYAZA-Gcwalisa igumbi ngoCoceko, oPhilayo kunye noCocekileyo kwiMizuzu - Ngcono kunayo nayiphi na into ehamba nge-Ultrasonic. I-AROMA DIFFUSER Isebenza NGOKUQINISEKILEYO kumagumbi amakhulu, iiholo, iiKhitshi ezinkulu, kunye...
Ukugcwaliswa kweNqwelo-mafutha eNgozi kubalulekile kwi-Usb Akukho manzi UMGANGATHO WOKUGUQWA-uxhaswe li-dituo rock-solid unyaka omnye. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, sazise kwaye SIYAYIKHUSELA! INDAWO YOKWENZA YINYANISO-ngaphandle kwamacingo, ukuphinda yenziwe kwaye kulula. Esi sisithunzi se-ivumba silungele...
Umzekelo No.: DT-C1
Umbane weArmatherapy Diffuser eneoyile efunekayo yeLemon 1. Ikomityi yoYilo lweCustomer Diffuser: Izinto zePP, uyilo lomjelo wamanzi, imbonakalo yokukhanya, indebe yokuhlanjululwa kwemoto, imigangatho yezandla, ukugxila kuhambo olusempilweni. 2. Ukutshintsha-kweqhosha elinye: Ukulawulwa kweqhosha elinye lokulinganisa...
Ukucofa komoya oZenzekelayo kweNzulizing i-Diffuser yeoyile I-Mini diffuser, Umenzi wobubi, ukuhambisa ngokuzenzekelayo i-athom, Ukunyibilikisa okuphezulu. Imibala ekhanyayo yesiphumo sokukhanya esimangalisayo somlingo, nceda uzive ulungile. Iinketho ezininzi zokuKhanya okuKhanyayo: I-Smart chip teknoloji yokulungisa...
I-OEM yeNkonzo yoMoya weHumidifieravuta Diffuser Oyimfuneko yeoyile Isithako sokudakumba kunye ne-Humidifier yomoya iza nomsebenzi ombaxa we-arhente ye-ultrason aroma kunye ne-aroma humidifier. Ixhotywe ngeplagi yombane, imveliso inokuxhunywa ngokulula nakweyiphi na isokethi eseludongeni. Yongeza nje amanzi kunye...
Ixabiso lento: USD 10.77 - 9.23 / Piece/Pieces
I-Walmart Car Wooden ebalulekileyo ye-oyile ye-Diffuser Imoto yethu eyahlukileyo inemoto, igumbi lokuhlambela, ikhaya, i-yoga, indawo yokuzivocavoca kunye ne-ofisi ye-aroma ye-aroma eyahlukileyo kwisitayile kunye nokugqitywa, i-aromatherapy diffuser ilungele naluphi na uhlobo lomhlobiso. Nokuba ujonge ioyile yeenkuni...
Iphunga elilelakho leNebulizing ivumba elifunekayo leeNgozi zeoyile ezibi I-100ml ye-Ultrasonic Diffuser yethu yeyona ndlela ilungileyo yokufumana izibonelelo zokuchaphazela iioyile ezifanelekileyo emoyeni. Sebenzisa indlela yokuhambisa amanzi kunye netekhnoloji ye-ultrasonic , iioyile ezifanelekileyo azifudumezi....
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 115 * 115 * 225mm; I-master carton: 600 * 455 * 250mm / 12PCS
I-Wood Ultrasonic Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diffuser yeoyile Vumela ii-aroma zendalo kunye nezibonelelo zeoyile ezifanelekileyo zokugcwalisa ikhaya lakho ngale nkuni yenokubaluleka kweoyile engafaniyo! Isithambiso esifunekayo seoyile sinokunceda ukunyibilikisa nokucoca umoya, kwaye kongeza ivumba lakho...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 170 * 170 * 225mm kunye ne-Master carton: 525 * 355 * 470mm / 12pcs
Aromatherapy Humidifier Aroma Essentialential Diffuser Air Yenza indalo yokuZola ngeUltrasonic Humidifier I-Ultrasonic diffuser kunye ne-aroma humidifier yindlela enesitayile yokufezekisa izibonelelo ngokusebenzisa iioyile ezifanelekileyo kunye nokuthoba igumbi lakho. Ukugqwesa ekhaya okanye eofisini. Iintlobo ezi-7...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 175 * 175 * 270mm kunye ne-Master carton: 54 * 36.5 * 56cm / 12pcs
7 Imibala ekhanyayo yokuKhanya eyiDiskus yeTyhefu yeoyile [KHAWULEZI UKUZONWABISA NGOKULANDELAYO NGOKUQINISEKILEYO NGOKULULA] Funa izibonelelo zokusebenzisa iioyile ezifanelekileyo nge-ultrasonic diffuser. Isithambisi seoyile ye-ultrasonic isebenzisa ukungalunganga kunye ne-aromatherapy ukunceda kuxinzelelo kunye...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 125 * 125 * 215mm kunye ne-Master carton: 515 * 390 * 450mm / 24pcs
I-Dolphin Shape Walmart Esibalulekileyo kwi-oli Diffuser Humidifier Ukuthambisa kunye Nokuphumla: Kuyapholisa ukuphazamisa ukungahambi kakuhle kodwa kukutshintsha kwemibala enezibane ezihlangeneyo ze-LED ukuseta imeko egqibeleleyo ngelixa unendawo ekuthwalekwa kuyo, okwenza oku kube sisiporomente esifanelekileyo...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 170 * 170 * 250mm; I-master carton: 525 * 355 * 520mm / 12pcs
I-Walmart Ultrasonic Fragrance Nebulizing Diffuser Isithambisi esinevumba elimdaka kunye nokutya okuziinkozo samkela itekhnoloji ye-ultrasonic yamvanje kwaye sisebenzise isithambiso esithozamisayo se-aromatherapy ukunika ukungalungisi okuthambileyo nokuthambisa umoya owomileyo . Itanki enkulu enamanzi angama-400ml...
Into ebaluleke kakhulu ye-oli yokuhambisa amanzi ngeNgethi yoMbane engenamanzi Kufuphi kuthi cwaka- ngokungafaniyo nezinye izinto ezinephunga elimnandi ngomsindo womatshini, le nto inokuphawuleka xa isebenza, ilungele igumbi lokulala, igumbi lomntwana kunye neyoga. Uyilo oluhle kakhulu-Imbonakalo egqwesileyo, le...
KwiChina I-Nebulizing Diffuser Abaxhasi
I-Nebulizing Diffuser luhlobo oluthile lwe- Ultrasonic Aromatherapy Diffuser esebenzisa inkqubo ye-nebulization ukufezekisa ukuphuma kwamanzi. Le nkqubo inyanzelisa ukwahlulwa kweoyile eyimfuneko ibe ngamasuntswana amancinci kakhulu kwaye ifuna isantya esiphezulu, umsinga womoya ocinezelweyo kunye nozzle owenzelwe ngokukodwa. Umgangatho wokukhutshelwa ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza kwaye kwenzeka ngokukhawuleza. Amasuntswana eoyile ebalulekileyo afikelela kuwe kwimeko yabo yendalo kwaye akunike zonke izibonelelo zabo zonyango zokuqala. Ngale ndlela ioyile efunekayo ayifakwanga ngamanzi ngenxa yokuba inamandla amakhulu. Kwakhona, akukho bushushu bufunekayo ukuze ubume beekhemikhali kwioyile eyimfuneko bungaguqukiyo Yongeza nje ioyile yakho eyimfuneko, hlala phantsi uphumle!
USB mthwalo Nebulizing Essential Oil Diffuser kunye kuyilo encinci. Ubungakanani beCompact bufanelana ngokufanelekileyo nekhaya lakho, iofisi, iimoto kunye nesutikheyisi yakho yokuhamba. Itekhnoloji yeathom eyahlukileyo yokubonelela ngevumba elicocekileyo nelingenanto.
Iingcebiso zeNebulizer oli Diffuser : Akukho manzi okanye bubushushu; Itekhnoloji ye-Atomizer; Coca iioyile ezifanelekileyo.
Ukuqulunqa i-Diffuser yeoyile ebaluleke kakhulu
Isichumisi seoyile sikaNebulizer
I-Ultrasonic Aromatherapy Diffuser